Ihe ị ga-ahụ na Okinawa | Akụkọ njem
Ihe ị ga-ahụ na Okinawa
Mariela Carril | | Japan, Ihe ị ga-ahụ
Njem zuru oke na Japan enweghị ike iche n'amaghị ama Okinawa. Ọ bụ otu n'ime mpaghara ndị mejupụtara obodo mana ọ bụ ihe dị ka awa atọ na-adịghị mma iji ụgbọ elu si Tokyo, nso Taiwan karia isi agwaetiti Japan.
Okinawa bụ ebe okpomọkụ nke oke osimiri turquoise na oke aja ọcha, mana n'otu oge ahụ akụkọ ọjọọ nke Agha IIwa nke Abụọ na nnukwu mbata na ọpụpụ ọgba aghara na-atụ n'azụ ya. Taa, na Actualidad Viajes, ihe ị ga-ahụ na Okinawa .
2 Ihe ị ga-ahụ na Okinawa
Mgbe Ọ bụ Alaeze Kyuky, alaeze nọọrọ onwe ya nke n'oge ụfọdụ na narị afọ nke iri na asaa na-akwụ ụtụ isi nye eze ukwu China, ma na 1609 mmeri ndị Japan malitere n'ihi ya ụtụ isi na-esi n'aka gafere ma ọ bụ n'oge eze ukwu Meiji. ná ngwụsị narị afọ nke XNUMX, na Japan weghaara ha n'ọchịchị ya n'ihu ọha. O doro anya na China achọghị ịma ihe ọ bụla ma ọ bụghị na United States dị ka onye ogbugbo, gịnị ka ị chere ga-eme? Emechara alaeze ahụ na Okinawa na agwaetiti ndị ọzọ ghọrọ ndị Japan.
Mgbe agha ahụ gachara, nke dị oke egwu maka mpaghara agwaetiti a, nke America gara n'ihu jikwaa ihe niile ma nyefee ha n'aka gọọmentị Japan n'oge dị iche iche. Mkpokọta mbufe ga-eme naanị na '70sỌ bụ ezie na a ka nwere ntọala ndị America taa na Okinawans nọgidere na-ajụ.
Mbụ ị ga-ekwu nke ahụ ọ bụ achipelago na na e nwere ọtụtụ agwaetiti ị ga-eleta, ma na e nwere okinawa Island otu, gini ọ bụ nke kacha na ndị mmadụ kacha biri na prefecture, na mgbakwunye na ịbụ ebe etiti njem.
Isi obodo mpaghara ahụ bụ obodo Naha na ọ bụ ebe ndị American bases dị. Akụkụ kacha mepere emepe n'obodo ahụ dị n'etiti agwaetiti ahụ, mana njedebe ndịda ka na-esighi ike ma ndị mmadụ bi na ya pere mpe, ebe ugwu na-ejigide ugwu oke ọhịa na ụfọdụ obodo ịkụ azụ.
Anọ m ebe ahụ na 2019, na njem ikpeazụ m gara Japan tupu ọrịa a na-efe efe, a ga m asị na obodo Naha ahụghị m nke ukwuu. Ewezuga okporo ụzọ bụ isi, ọ nweghị ọtụtụ ihe ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na ị jiri bọs na-ebugharị ntakịrị, na-achọ ndị na-eme ihe nkiri dị nso, ị ga-ahụ na obodo ahụ dị ntakịrị mwute na ọ dịghị mma dị ka nke ị na-ahụ na Central Japan.
Anyị rutere ụgbọ elu site na ọdụ ụgbọ elu Haneda na site na ọdụ ụgbọ elu mpaghara anyị were monorail nke, n'agbanyeghị na ọ naghị eme njem dị ukwuu, na-ewetara gị nso ebe kachasị mkpa nke ogbe ndịda Naha. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị dị ihe dị ka mita 400 site n'ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ ezie na anyị chere na ụlọ ahịa ndị ahụ na-emechi maka izu ụka, ee e, ha na-anọ otu ahụ kwa ụbọchị anyị na-anọ, ya mere, ọ dị ka mpaghara mmụọ karịa obodo dị ndụ.
Anyị chọrọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị nso isi uzo, Kokusaidori ma ọ bụ Calle Internacional, dịka ntụgharị asụsụ ga-adị. Ihere emeela kilomita abụọ n'ogologo wee gafee etiti Naha na-amalite karịa ma ọ bụ obere na ọdụ ụgbọ ala etiti na ụlọ nzukọ obodo.
Ọ nwere ụlọ ahịa dị n'akụkụ abụọ, ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, niile n'ụdị obodo osimiri. Ụfọdụ nnukwu na mbara emeghekwara veranda kpuchiri ekpuchi juputara na ụlọ ahịa ndị na-emeghe n'ime ọtụtụ alaka ndị ọzọ, ma n'ebe ahụ ị nwere ike ịla oge na-achọ ego ma ọ bụ na-agbanahụ anyanwụ: Mutsumidori na Hondori.
Ma ọ bụ na ọ bụrụ na ị gaa Naha n'oge okpomọkụ ị ga-anwụ n'ihi okpomọkụ. Anyị na-eche n'ezie banyere oké osimiri ma ọ na-ekpo ọkụ nke ukwuu. Anyị gakwara ịchọ abalị mana ọ dị ntakịrị. Anyị chere na n'ihi na ọ bụ ihu igwe okpomọkụ, anyị ga-ahụ ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọṅụṅụ meghere ruo mgbe e mesịrị, mana mba. mechie ihe niile n'oge na n'etiti abalị ị nwere ike ịrahụ ụra.
N'ezie mmegharị ahụ na-elekwasị anya na mita 200 ma ọ bụ 300, ọ bụghị ọtụtụ ihe ọzọ, "ndụ" na-amalite ibelata ka ị na-eje ije na ọ bụ ezie na e nwere ụlọ ọrụ azụmahịa ọhụrụ ọ dị ka ụlọ ahịa ndị ahụ dị ka '70s ma ọ bụ' 80s. N'ehihie, mgbe ndị mmadụ si njem nlegharị anya na n'ụsọ osimiri na-alọta, enwere ọtụtụ ndị mmadụ na oge eruola ịzụ ahịa maka onyinye ma ọ bụ nwee ice cream. akara mpaghara kacha ewu ewu bụ Akara Anụmanụ ọ na-atọkwa ụtọ nke ukwuu. Ị nwekwara ike ịnwale anụ mpaghara, enwere ọtụtụ anụ mmanya na-akwalite ya.
Obi abụọ adịghị ya na ihe kacha mma nke agwaetiti ahụ nwere inye n'ihe gbasara njem nlegharị anya bụ Churaumi Aquarium, bụ aquarium kacha mma na obodo na mgbe emechiri ya ruo ọtụtụ ọnwa n'ihi nje corona, ọ meghere ọzọ n'October gara aga. Ebe ahụ sitere na '70s, mana n'afọ 2002, emegharịrị ya kpamkpam. Kedu ihe kacha mma? Nnukwu Kuroshio tank, otu n'ime ndị kasị ibu n'ụwa. Akpọrọ ya aha maka Kuroshio ugbu a bụ nke na-ahụ maka ọmarịcha ụdị ahịhịa na anụmanụ dị n'agwaetiti ndị ahụ.
N'ime tank e nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche, gụnyere whale shark na stingrays. mara mma! Aquarium nwere ala atọ, yana ọnụ ụzọ dị n'ala nke atọ yana ụzọ ọpụpụ na nke mbụ. Enwere ọdọ mmiri ebe ị nwere ike imetụ azụ aka wee hụ ọmarịcha ngosi nke coral dị ndụ. Ụzọ nke ebe ahụ na-atụ aro na-ewega gị na Kuroshio Tank na ebe a bụ ebe ị na-anọ ọtụtụ n'ime nleta n'ihi na echiche dị ukwuu na na chioma ị pụrụ ịhụ otú azụ azụ. E nwekwara ụlọ ihe nkiri-ihe nkiri nke nwere ntụle banyere ndụ mmiri nke agwaetiti ndị ahụ.
Eziokwu bụ na tank bụ ihe kacha mma na aquarium, ma ọ bụrụ na-amasị gị ndụ mmiri, ndị ọzọ agaghịkwa emechu gị ihu. Enweghị ụkọ ọdọ mmiri dị n'èzí nwere dolphins, nduru oké osimiri, na manatee. Kedu ka isi esi esi ebe a? Ọ kacha mma ịgbazite ụgbọ ala ma gaa n'onwe gị n'ihi na Ọ dị kilomita 90 site na ogbe ndịda Naha, ma ị nwekwara ike gaa na ụgbọ alas, na-eji ọdụ ụgbọ elu Okinawa ma ọ bụ Yanbaru Express ma ọ bụ ụgbọ ala 117. Nbanye bụ 1880 yen.
Enwere m mmasị n'akụkọ ihe mere eme na otu n'ime ihe na-adọta m mgbe niile na Japan bụ akụkọ ihe mere eme ya na ntinye aka na Agha Ụwa nke Abụọ, ya mere mmasị m dị. Ya mere, agara m na Ncheta agha. Okianawa bụ ebe ahụ agha ndị kasị wụfuo ọbara nke ihe a na-akpọ Agha Pacific na a na-eme atụmatụ na ihe dị ka puku mmadụ 200, ọkara ndị nkịtị, gbakwunyere ndị America 12.500, nwụrụ n'ọgụ ahụ sitere na Eprel ruo June nke '45.
Ncheta nke agha ahụ dị arọ ma na-adị mgbe niile ka e nwere ebe ngosi ihe mgbe ochie, ihe ncheta na ihe ncheta n'ebe nile. N’ezie, o were eze ukwu ogologo oge tupu ya enwee ike ịbanye n’àgwàetiti ahụ n’ihi na ndị mmadụ achọghịdị ịhụ ya. Isi ihe ncheta bụ Ogige Ncheta Udo nke dị na nsọtụ ndịda nke agwaetiti ahụ, ebe ngosi nka na-enye nghọta banyere agha na agha kwesịrị ekwesị.
E nwekwara nnukwu akwụkwọ mpịakọta nkume na-ebu aha ndị agha dara ada na ndị nkịtị, gụnyere ndị Taiwan na ndị Korea bụ ndị ọrụ mmanye ma ọ bụ ndị ohu Japan. Ebe dị kilomita ole na ole ka ọ dị Ihe ncheta Himeyuri na-echetara ụmụ akwụkwọ sekọndrị ụmụ nwanyị ndị na-arụ ọrụ agha, n'ụlọ ọgwụ ndị e gwupụtara na nkume dị n'ugwu n'ọnọdụ ọjọọ, na ndị, n'ọtụtụ akụkụ, nwụrụ.
N'echiche a, a na m akwado nke ukwuu gaa na n'okpuruala Barracks nke ndị agha mmiri Japan. Ị nwere ike iji ụgbọ ala rute ebe ahụ, buru ya na ọdụ ụgbọ ala Naha. Ebe a bụ n'okpuruala na mejupụtara a netwọk nke tunnels nke ọtụtụ mita, nke nwere ụzọ, steepụ na ọnụ ụlọ dị iche iche, bụ́ nke jere ozi dị ka isi ụlọ ọrụ ndị agha mmiri Japan n’oge agha ahụ.
Ị ga-ahụ oghere ebe onye na-emepụta ọkụ dị, ndị ọzọ ebe ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ, steepụ nke na-ejikọta corridors na elu dị iche iche na ọnụ ụlọ nke mgbidi ya na-ejigide akara nke shrapnel nke ụfọdụ ndị agha kpebiri igbu onwe ha tupu mmeri a na-abịa. Ọ bụ n'ezie ịchịkọta ịgagharị ebe a. Anyị nwere chi ọma na anyị bụ naanị mmadụ anọ ka anyị si gafee n'ụzọ. Ọ naghị ekpo ọkụ ma ọlị, ma anyị enweghị ike iche n'echiche otú ọtụtụ narị ndị agha si biri n'okporo ụzọ ndị ahụ siri ike.
Mbanye bụ yen 600 ma na-emeghe kwa ụbọchị site na elekere 9 nke ụtụtụ ruo elekere ise. Ọ bara uru. Saịtị ọzọ bụ kpochapụwo na Okinawa bụ Shuri Castle. N'ụzọ dị mwute, ọ gbara ọkụ obere oge ka anyị gachara, na October 2019, ma e nwere atụmatụ maka nwughari na 2026. Ka ọ dị ugbu a ị nwere ike ịga hụ ka saịtị ahụ si arụ ọrụ. N'ụzọ dị mwute na-eme ọtụtụ ihe na akụkọ ihe mere eme ụlọ na Japan, ha na-mere nke osisi na nkume, n'ihi ya, ọ bụ nnọọ ike ịhụ ihe mbụ na n'ezie ochie ụlọ.
Shuri bụ aha isi obodo mbụ nke Alaeze Ryuku na nnukwu ụlọ dị na ndepụta UNESCO Ihe Nketa Worldwa. Ụlọ elu ọzọ mebiri emebi bụ Nakagusuku Castle na e nwekwara ndị Ogige Shikinaen, nke bụ ubi ndị eze ma ọ bụ Tamaudun, eze mausoleum. Iji mara omenala obodo ị nwere ike ịga Okinawa World ma ọ bụ Ryukyu Mura. Ọ bụrụ na-amasị gị nka, e nwere Okinawa Prefectural Museum, ọ bụrụ na-amasị gị ceramik, ị nwere ike ịga ije na ịzụ ahịa gburugburu. Tsuboya district.
Obodo Ndị America Ọ bụ ebe azụmahịa dị nso na ntọala America, mana ọ bụrụ na ịnọghị na Okinawa ịhụ ndị America ka mma, eletala ya. Ọ bụrụ na-amasị gị painiapulu, a ga m agwa gị na Okianawa nwere ihe ubi nke mkpụrụ osisi a ma bụrụ nnukwu onye na-emepụta ihe. Ha dị oke ụtọ na kemmiri ihe! Nke Nago Pineapple Park bụ kacha. Ma dị ka ị maara nke ọma, Ndị Japan bụ nnukwu ndị na-aṅụ biyaay local ika bụ Orion. Ị nwere ike ịga leta distillery na njem na-atọ ụtọ nke ukwuu.
Eziokwu bụ na ihe kacha mma ị ga-eme n'àgwàetiti Okinawa bụ ịnọ na Naha, nye obodo ahụ ụbọchị ole na ole ma gbazite ụgbọ ala iji gaa n'àgwàetiti ahụ, ma ọ bụrụ na ị gaghị agafe n'àgwàetiti ọzọ nke okpomọkụ. . Na ụgbọ ala ị nwere nnwere onwe ịgagharị na ị nwere ike ịga na obere agwaetiti ndị a na-ejikọta na àkwà mmiri na ndị mara mma nke ukwuu. N'ọnọdụ anyị, anyị buru ụgbọ elu gaa Miyakoshima, àgwàetiti mara mma na ebe okpomọkụ ebe anyị nọrọ nnukwu ụbọchị ise… na-ekpo ọkụ nke ukwuu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Ihe ị ga-ahụ » Ihe ị ga-ahụ na Okinawa
Ihe ị ga-ahụ na Navaluenga
Ebe ị ga-eme njem dị ka di na nwunye na Spain